Semalt: Kungani okuqukethwe namagama angukhiye kubalulekile kumklamo wewebhu?
Iwebhusayithi engenakho okuqukethwe okulungile, futhi ayiklanyelwe kahle, ngeke ithole ithrafikhi, okusho ukuthi ngeke ikusize inhlangano yenza umthelela we-intanethi.Kuzophinde kuhambisane nezinjini zokusesha ngenxa yokuntuleka kokuqukethwe okufanelekile. Amagama angukhiye kanye nokuqukethwe kudlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni isimo sewebhusayithi yakho.
u-Ivan Konovalov ovela ku u-Semalt oxoxwe ngezansi ngezizathu, inhlangano kufanele ikwazi okuqukethwe kanye namagama angukhiye
1. Ukukwazisa amakhasimende akho angahle
Kungumsebenzi wawo wonke amabhizinisi ukufundisa amakhasimende ayo ngemikhiqizo noma amasevisi abo. Ungakwazi ukufaka umkhiqizo kulabo abathengi futhi ulindele ukuba bahambisane nokuthenga. Ngisho ezinsukwini zakudala lapho ulwazi lukhuni ukufika, izinkampani zasebenza ekufundiseni abantu ngaphambi kokuthengisa umkhiqizo.
Kungenxa yalesi sizathu ukuthi kufanele ube nokuqukethwe okulungile mayelana nemikhiqizo yakho yabathengi. Ngaphezu kwalokho, abathengi badinga ulwazi oluthe xaxa mayelana nomkhakha kanye nemakethe yonkana ukuze benze izinqumo ezinolwazi. Umklamo wewebhu obeka konke okucatshangelwayo ngokuqinisekile uzobamba izixuku.
2. Uzoba yindawo yokugunyaza ngokuya kolwazi
Abantu ngokuvamile banethemba i-website noma ngisho nomuntu ngaleyo ndaba ebonisa ukuthi bangathembeka ukuze bazi ukuthi bakhuluma ngani. Uma ngabe iwebhusayithi yakho ibonakala ngabasebenzisi be-intanethi ukuba ibe yinto enhle njengomthombo wolwazi, abantu abaningi futhi bazoqhubeka beza. Yini okunye, abantu bayoba nomqondo ovamile wokuthi indawo kuphela abangathola ulwazi lomkhiqizo omuhle yisayithi lakho. Ngokwenza la maqiniso angaphakathi ngaphakathi kwenqubo yokuklama iwebhu, unika ithuba elikhulu lokunyakaza emakethe ngakwesokunene sakho.
3. Injini yokusesha ihlelwa ngcono
Wonke amawebhusayithi adalwe ngombono noma umqondo wokuwuthola phezulu kwamakhasi enjini yokusesha. Ngokuqukethwe okulungile nokubeka amagama angukhiye ezindaweni ezifanele, iwebhusayithi yakho inethuba elikhulu lokubonwa ngabantu abaningi. Isizathu esiyinhloko salokhu kungenxa yokuthi izinjini zokusesha zizolikhomba kakhulu emakhasini okusesha.
4. Iwebhusayithi yakho izothola ama-backlink ngaphezulu
Uyazi ukuthi yisiphi isakhiwo sokuxhumanisa, kepha kungase kudingeke wazi ukuthi kubaluleke kangakanani kuwebhusayithi yakho. Amawebhusayithi anolwazi oluphakeme kakhulu namagama angukhiye ahlelwe kahle, amawebhusayithi amaningi namabhulogi azofuna ukubuyela emuva nabo. Ngale ndlela, iwebhusayithi enjalo ithola ukuchofoza okuningi kunalokho okungenakho okuqukethwe okuphezulu Source .